Macluumaadka Leenka Khadka Tooska ah ee COVID-19
Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan COVID-19, wac 1-800-525-0127 kadibna riix lambarka 7 aad. Marka ay kaa qabtaan wicitaanka taleefanka, sheeg/dheh luuqadaada (Soomaali) si aad u hesho adeegyada tarjumaada luuqada. Leenka khadka tooska waxaa la heli karaa Isniinta lagasoo bilaabo 6 a.m. illaa 10 p.m., iyo Talaadada illaa Axada (iyo maalmaha fasaxa ciida lagu jiro) 6 a.m. ilaa 6 p.m.
Guriga xanuun dartii maka soo bixi la'dahay mana u baahan tahay talaallka COVID-19?
Waxaa jira saddex siyaabood oo la isku diiwaangeliyo.
Tallaalka Korona fayraska (COVID-19)
Xogta hadda jirta oo faahfaahsan oo ku saabsan tallaalada COVID-19, fadlan booqo bogga webseetkaan oo lagu heli karo luuqadaada: Xogta Macluumaadka Tallaalka COVID-19
Astaamaha qarsoon ee qofka kaliya uu dareemayo, calaamadaha muuqda iyo kahortagga COVID-19
Astaamaha COVID-19 ugu weyn ee qarsoon ee qofka kaliya uu dareemaayo waa sidaan soo socoto:
Qandho ama qarqaryo, qufac, neefta oo yaraata ama neefta oo qofka ku adkaata, daal, murqo ama jir xanuun, madax xanuun, luminta dhadhanka ama wax urinta oo cusub, dhuun xanuun, cabbur ama sanka oo biyo kasocdo, lallabbo ama matag, iyo shuban.
Wac lambarka 911 haddii aad isku aragto calaamadaha digniinta xaaladaha degdegga ah ee COVID-19 ee soo socdo:
Neefta oo kugu adkaata/kudhibto
Xanuun ama cadaadis joogta ah oo kaa saaran xabadka
Wareer degdega ah
Awood la'aanta in wax laga jawaabo
Bishimaha ama wajiga oo noqdo basali/midab iskugu jira buluug iyo guduud
Waa kuwee kooxaha dadka ah ee khatarta ugu jira?
Waayeelka, dhammaan dadka jira da' kasta ee xanuuno/jirro la ildaran/la jiifo, iyo haweenka uurka leh ayaa khatar wayn ugu jiri kara inay xanuun xun/daran ka qaadaan cudurka COVID-19.
Cudurka Fayraska Cusub ee Korona fayraska (COVID-19)
Ma COVID-19 baa mise waa hargab?
Sidee ayaan aniga ama qoyskeyga ooga difaaci/ilaalin karaa?
Qaado tallaalka oona kadib qaado tallaalka xoojinta ah marki aad uqalmato/xaq uyeelato.
Guriga iska joog haddii aad xanuunsan tahay.
Xiro afxirka/maaskaro oona ujirso/kafagoow dadka kale lix fiit (labo mitir) marka aad aado meelaha dadku ku badan yihiin.
Ka fogoow goobaha dadka badan ay iskugu yimaadaan iyo meelaha aan lahayn hawo fiican.
Si joogto ah udhaq gacmahaada ama isticmaal daawada/sanitaysarka gacmaha.
Ku dabool qufacaaga iyo hindhisadaada xusulka ama tiish.
Ha taaban wajigaada, afkaada, sankaada ama indhahaada.
Nadiifi qeybta/dusha sare ee sheeyaasha gurigaada.
Haddii aad qabto calaamadaha COVID-19, kalahadal daryeel bixiyahaaga caafimaadka. Haddii aadan lahayn daryeel bixiye/dhakhtar, latasho xarunta daryeelka degdega ah ama xarunta caafimaadka bulshada ee adiga kuudhaw. Haddii aadan lahayn caymis, laxariir waaxdaada caafimaadka ee maxalliga ah.
Xogta hadda jirta oo faahfaahsan oo ku saabsan baaritaanka COVID-19, fadlan booqo bogga webseetkaan oo lagu heli karo luuqadaada: Xogta Macluumaadka Baaritaanka COVID-19
Karantiilka iyo Iskaliyeelida/Isgo'doominta:
Si aad u ogaato xog badan oo ku saabsan waxa erayadaan loola jeedo, iyo muddada la iskarantiilaayo ama la isgo’doominaayo, booqo, webseedka Xisaabiyaha Iskarantiilka iyo Isgo’doominta.
Afxirka waxa uu yareeyaa ku faafinta qaybaha fayraska hawada marka qofka qaba COVID-19 uu hadlo, qufaco, ama hindhiso. Waxaa suurtagal ah inaad qabto COVID-19 oo aadna leedahay astaamo khafiif ah ama aadan lahayn astaamaha cudurka. Isticmaalka afxirka waxa uu kahortagayaa ugudbinta dadka kale cudurka COVID-19 adiga oo aan ogeyn. Waxa adiga kula ah astaamaha khafiifka ah ee caabuqa, ayaa dhimasho ukeeni kara qofka kale.
Hoos waxaa ku qoran tilmaamaha kusaabsan xirashada afxirka:
Afxirku waa inuu daboolaa afkaada iyo sankaada oo uuna sifiican ula ekaadaa dhinacyada wajigaada.
Xiro oona iskabixi afxirkaada adiga oo qabanaayo siddooyinka ama xargaha qeybta dhagaha lagu xiro, hana isku dayin inaad taabato qeybta hore ee afxirka ama wajigaada.
Tuur oo fogee afxirka loo isticmaalo habraacyada caafimaadka ama dhaq maalin kasta waji daboolka aad isticmaasho, oo had iyo jeerna dhaq gacmahaada.
Carruurta da'doodu kayar tahay labo sano waa in aysan marnaba xiran afxirka iyo carruurta da'doodu udhaxeyso 2 illaa 4 sano waa inuu isha ku hayo qof wayn marka ay xiran yihiin maaskaro.
Amarada xirashada afxirka ayaa laga reebayaa dadka qaarkood oo qabo xaaladaha cafimaad qaarkood. Haddii aad ka qabto wax walaac ah, la tasho dhakhtarkaaga si aad u ogaato waxa adiga kuu fiican.​​​​​
Booqashada dukaamada iyo goobaha dadweynaha si badbaado badan leh
Waxaa jira waxyaabo badan ay tahay inaad kafakarto kahor, inta lagu jiro, iyo kadib marka aad kabaxeysid guriga oo kusaabsan badbaadadaada iyo badbaadada dadka kale.
Kahor inta aadan kabixin guriga:
Ha aadin dukaan ama goob kale oo ay dadku iskugu imaadaan haddii aad xanuunsan tahay, haddii ay suurtagal tahay. Ka codso qof kamid ah qoyska ama saaxiib inuu alaabta kuusoo qaado.
Iskuday inaad habka oonleenka aad kudalbato raashinka, daawooyinka. iyo alaabaha kale si laguugu keeno gurigaada.
Hubi inay jiraan jadwallo/waqtiyo gaar ah. Dukaamada ayaa laga yaabaa inay siiyaan saacado gaar ah oo ay uqabanayaan shaqada dadka kaweyn 65 sano iyo kuwa qabo xanuunada gaarka ah ee caafimaad. Iskuday inaad aado dukaanka waqtiyada firaaqada ah oo ay dad badani joogin, haddii ay suurtagal tahay.
Gacmahaada dhaq kahor inta aadan kabixin gurigaada.
Marka aad dibada/banaanka ubaxdid:
Isticmaal afxirka si uu udaboolo sankaaga iyo afkaaga.
Kafogoow/Ujirso dadka kale ugu yaraan lix fiit (ama labo mitir) oo udhexeyso adiga iyo dadka kale, xitaa leenka lacag bixinta markaa taagan tahay.
Dabool qufacaada iyo hindhisadaada.
Iska ilaali inaad wejiga ku taabatid gacmahaada.
Haddii aad dukaameysaneyso, isticmaal gacma dhaqa sanitaysarka ama tirtirayaasha jeermis dilaha ah si aad ugu nadiifisid gacanka/meesha la qabsado marki lajiidayo gaariga ama dambiisha lagu dukaameysto.
Markaad guriga tagto/timaado:
Haddii aad xiran tahay maaskaro, hubi inaad dhaqdo ood dhigto meel ammaan ah, ama iska tuur haddii uu ahaa maaskaro la iska tuuri karo.
Samee tallaabooyinka badbaadada cuntada. Haku buufin/Hamarin sunta jeermis dilaha cuntooyinka cayriinka/sidooda lagu cuni karo. Dhaq miraha iyo khudaarta sidi caadiga ahayd.
Tilmaamaha dukaameysiga cuntada ee COVID-19.
Dadka halista sare ugu jira inuu ku dhaco xanuunka aadka udaran
Dadka halista dheeraadka ah ugu jira xanuunka aadka udaran waxa ay qaadi karaan taxadarooyinkaan dheeraadka ah:
Laxariir dhakhtarkaaga caafimaadka marki aad talo ubaahan tahay. Rugaha caafimaadka qaarkood waxa ay adeegsadaan "akoonada goobaha interneetka ee bukaanka" si ay ula xariiraan, qaar badan oo kamid ah rugaha caafimaadka waxa ay leeyihiin shaqaale qabto wicitaanada oona siiyo dadka talooyin iyo waano. Hase yeeshee, waxaad niyada kuhaysaa inay noqon karaan kuwo aad u mashquulsan.
Samee liiska daawooyinka aad badanaa ubaahan tahay kana hubi inay yaalaan farmashigaaga ama bixiyahaada daryeelka caafimaadka si aad u ogaatid inay kusiin karaan daawo qoris dheeraad ah. Hayso diiwaanada daawooyinka kale ama kuwa dheeraadka ah ee aad qaadato lana soco xaaladahaaga caafimaad ee hadda sida lagu faray.
La soco dhammaan tallaallada lagu taliyay. Xaqiiji inaad qaadato tallaalka COVID-19 iyo tallaalka xoojinta ah marka aad uqalanto. Halkaan guji/kudhufo si aad uheshid bixiyaha tallaalka ee kuudhaw.
Xaqiiji inaad haysato cunto kugu filan iyo alaabaha nadaafada gaarka ah si ay muddo kuusii hayaan haddii aad ubaahato inaad isgo'doomiso ama iskarantiisho.
Raadso qof ku caawin karo una sheeg inuu taleefoon kaasoo waco si uu u xaqiijyo inaad fiican tahay. Xaqiiji inuu qofkaan fahamsan yahay inuusan kusoo booqan haddii uu xanuunsan yahay.
Lasoco caafimaadkaaga oona raadso daryeel caafimaad haddii loo baahdo.
Haweenka uurka leh, ilmaha iyo COVID-19
Waxa ay tahay inaad ogaato haddii aad hadda uur leedahay.
Haweenka uurka leh ama dhawaan uurka yeeshay waxa ay halis dheeraad ah ugu jiraan inay xanuun aad udaran ka qaadaan COVID-19 marka loo barbardhigo haweenka aan uurka lahayn.
Haweenka uu kudhaco cudurka COVID-19 inta ay uurka yihiin waxa ay sidoo kale halis dheeraad ah ugu jiraan inay dhicisaan (inuu canugu dhasho kahor 37 asbuuc ee uu kudhalan jiray) iyo dilan, waxaana laga yaabaa inay halis dheeraad ah ugu jiraan dhibaatooyinka kale ee uurka.
Haweenka uurka leh ama dhawaan yeeshay uurka iyo dadka ay la kulmaan waa inay qaadaan tallaabooyinkaan si ay ooga caawiyaan inay isaga ilaaliyaan inuu kudhaco cudurka COVID-19:
Qaado tallaalka iyo xoojiyaha talaalka.
Ka fogoow/ujirso 6 fiit dadka kale, kana fogoow goobaha dadka badan ay iskugu yimaadaan iyo meelaha aan lahayn hawo fiican.
Isbaar si aad ooga hortagto inaad kufaafiso dadka kale.
Inta badan gacmo dhaqo oona kudabool qufacaaga iyo hindhisadaada xusulka ama tiish.
Si joogto ah u nadiifi oo daawada jeermis dilaha kubuufi gurigaada.
La soco caafimaadkaada maalin walbo.
Wac bixiyahaaga caafimaadka isla markiiba haddii aad wax walaac ah ka qabto uurkaaga, haddii aad xanuusanto, ama haddii aad umaleyso in laga yaabo inaad qabto cudurka COVID-19.
Uurka iyo tallaalka COVID-19
Tallaalka COVID-19 waxaa lagula talinayaa haweenka uurka leh, haweenka naaska nuujinayo/ilmo nuujinayo, kuwa raba inay hadda uur qaadaan, ama laga yaabo inay uur yeeshaan mustaqbalka.
Caddeynta kusaabsan badqabka iyo waxtarnimada tallaalka COVID-19 inta uurka laleeyahay waa ay sii kordheysay. Xogta waxa ay soo jeedineysaa in faa'iidooyinka laga helo qaadashada tallaalka COVID-19 ay ka miisaan culus yihiin khatar kasta oo la yaqaano ama suurtagal ah oo laga yaabo in laga qaado tallaalka xilliga uurka.
Haweenka uurka leh waa inay qaataan tallaalka xoojinta ah ee COVID-19 marka ay u qalmaan/xaq uyeeshaan.
Talaallada COVID-19 ma keenaan caabuqa COVID-19, uma keenaan dadka ay kamidka yihiin haweenka uurka leh iyo ilmahooda.
Hadda majirto wax caddeyn ah oo muujineyso in wax tallaal ah, oo ay kujiraan tallaalada COVID-19, ay sababaan dhibaatooyinka madhaleysnimada haweenka ama ragga.
Uur ma tahay mana qabtaa su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19? Lahadal bixiyaha daryeelkaada caafimaadka ama la xariir MotherToBaby, kuwaas oo khuburadoodu diyaar u yihiin inay kaaga jawaabaan su'aalaha taleefoon ama wada sheekeysi qoraal ah. Adeega bilaashka ee qarsoodiga ah waxaa la heli karaa Isniinta-Jimcaha, 8 a.m. illaa 5 p.m. Booqo MotherToBaby (HooyadaIyoCanuga) si aad toos ula sheekeysato ama iimayl udir, ama ka wac lambarka 1-866-626-6847 (kaliya lagu heli karo luuqadaha Ingiriiska iyo Isbaanishka).
Daryeelidda ilmaha dhawaan dhashay haddii aad qabto COVID-19
Inta badan ilmaha dhawaan ay dhaleen haweenka qabay cudurka COVID-19 inti ay uurka lahaayeen maqabaan ilmahaas cudurka COVID-19 marka ay dhashaan.
Inta badan ilmaha dhawaan dhashay oo laga helay COVID-19 ma lahayn astaamo ama waxa ay lahaayeen astaamo fudud waa ayna kabogsadeen/fiicnaadeen. Wararka ayaa sheegaya in qaar kamid ah ilmihi dhawaan dhashay ay lahaayeen xanuunada aadka udaran ee COVID-19.
Haddii aad kujirtid iskaliyeelida/isgo'doominta COVID-19 oo aadna haysato ilmo dhawaan dhashay, samee/qaad taxadarooyinka soo socdo illaa mudadaada iskaliyeelida ay kadhamaato:
Joog guriga si aad ooga fogaato dadka kale ee ka baxsan gurigaada.
Iska go'doomi (ka fogoow) xubnaha kale ee qoyska kuwaas oo aanan qabin cudurka oona ku xiro afxirka goobaha lawada wadaagayo/lawada isticmaalayo.
Yeelo daryeel bixiye caafimaad qabo kaas oo si buuxdo loo tallaalay oo aana halis weyn ugu jirin inuu kudhaco xanuunka daran ee cudurka inuu kuu siiyo daryeel ilmahaada dhawaan dhashay. Haddii ay suurtagal tahay, iska lis/iska shub caanaha naaska si uu daryeel bixiye kale uu usiiyo canuga. Haddii aad ku quudineyso caanaha ilmaha/caano booraha, ha u diyaariyo daryeelaha caafimaadka qaba.
Raac taxadarooyinka lagula taliyey haddii ay qasab kugu tahay inaad adiga daryeesho canugaada dhawaan dhashay kahor inta aysan dhammaan muddadaada isgo'doominta, oo ay kamid yihiin xirashada afxirka marki aad quudineyso ama aad hayso ilmahaada.
Ka fiiri ilmahaada dhawaan dhashay astaamaha COVID-19.
Uurka, dhalmada, iyo daryeelida ilmahaaga looga shakiyay ama laga helay cudurka COVID-19.
Caddeynta hadda jirta waxa ay muujineysaa in caanaha naaska aysan u badneyn inay ugudbiyaan fayraska ilmaha. Cilmi baaris dhawaan la sameeyey ayaa muujineyso in haweenka laga tallaalay cudurka COVID-19 ay ugudbiyaan ilmahooda unugyada difaaca jirka ayagoo umarinayo caanaha naaska. Haddii aad qabto COVID-19 oo aad doorato inaad naas nuujiso/ilmo nuujiso:
Dhaq gacmahaada kahor naas nuujinta/ilmo nuujinta
Xiro afxirka marki aad naas nuujineyso/ilmo nuujineyso iyo markasta oo aad ujirto ilmahaada 6 fiit.
Leenka khadka xaaladaha aan degdegga ahayn ee taageerada waalidka ayaa loo heli karaa hooyo kasta oo uur leh ama cusub, ama kuwa ay jecel yihiin ee ubaahan taageerada iyo xogta ku saabsan caafimaadka maskaxda. Wac lambarka 1-888-404-7763, Isniin- Jimco 9 a.m.- 4:30 p.m. (kaliya lagu heli karo luuqadaha Ingiriiska iyo Isbaanishka). Leenkeena khadka ee xaaladaha aan degdegga ahayn waxaa ka shaqeeya shaqaale bulsho, daaweeye ruqsad haysta ama hooyooyin waayo aragnimo uleh walwalka/walaaca dhalmada kadib ah. Wicitaanada ka danbeeyo saacadaha shaqada waxaa lagu soo celin doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Naga soo wac, qoraal ama iimeel noogu soodir warmline@perinatalsupport.org.
Daryeelidda naftaada iyo qoyskaada
Washington Listens (Adeegyada dhageysiga dhibaatooyinka dadka ee Washington): Haddii aad ubaahato inaad qof kala hadasho walaaca uu keenay COVID-19, ka wac Washington Listens lambarka 1-833-681-0211. Mar kasta waxaa joogo qof kula hadlayo Isniin illaa Jimco laga bilaabo 9:00 a.m. illaa 9:00 p.m. iyo maalmaha dhamaadka asbuuca laga bilaabo 9:00 a.m. illaa 6:00 p.m. Helitaanka adeegyada dadka dhagoolka ee TTY iyo adeegyada luuqada ayaa la heli doonaa. Waxaad sidoo kale heli kartaa ilaha dheeraadka ah ee loogu talagalay badqabka maskaxda iyo dareenka halkaan (webseet Af-Ingiriisi ah).
Si fiican ula soco xaalada hadda jirta ee musiibada cudurka iyo tallooyinka dheeraadka ah oo wato xogta laga helaayo warbaahinta la isku hallayn karo, hay'adaha caafimaadka dadweynaha iyo kuwa maxalliga ah, iyo cusbooneysiimaha laga helaayo webseetyada caafimaadka bulshada.
Sameyso liiska ilaha bulshada, sida lambarada taleefoonka, webseetyada iyo akoonada baraha bulshada. Waxaad kudarsan kartaa lambarada khadka tooska ee iskuulada, dhakhaatiirta, ururada caafimaadka bulshada, adeegyada bulshada, xarumaha bulshada ee loogu talagalay caafimaadka maskaxda iyo dhibaatooyinka.
Xubnaha qoyska ama saaxiibada kula xariir taleefoonka ama adigoo isticmaalayo adeegyada onleenka/khadka.
Keyd sameyso oo hayso sahayda caafimaadka ee aasaasiga ah (sida saabuunta, gacma dhaqayaasha jeermis dilaha ah, tiish, heerkulbeeg/qalabka kuleelka ama qandhada lagu cabiro, daawooyinka yareeyo qandhada, iyo agabka COVID-19 la isaga baaro guriga).
Iskuday inaad haysato sahayda daawooyinka adiga iyo xubnaha qoyskaada aad sida joogtada ah uqaadataan.
Taageerada xubnaha qoyskaada dhalinyarada ah
Sii taageerada iyo kuxirida joogtada ah ee saaxiibadooda iyo qoyskooda adiga oo kula hadlaayo taleefoon, qoraal, iimayl, ama baraha bulshada.
Haddii warka ka helitaanka cudurka uu dhibo, ha hilmaamin inaad nasiino siiso. La hadal carruurtaada si aad ugu kala caddeysid xogta laga yaabo inay ka helaan interneetka ama ilaha kale ee laga helo xogaha.
Xoogga saar taageerida carruurta adiga oo kudhiiri galinaayo inay su'aalo kuweydiiyaan adiga oona ka caawinaayo inay fahmaan xaalada hadda taagan.
Kala hadal dareemada ay qabaan oona ku ixtiraam.
Ka caawi inay ku soo bandhigaan dareenkooda sawiradda iyo hawlaha kale.
Sii kalsooni iyo xoogaa dulqaad kabadan sida caadiga ahayd.
Xitaa haddii qoyskaadu kujiro isgo'doominta ama karantiilka, niyada kuhayso inay tahay mid kumeel gaar ah.
Ka dhig jadwalka qoyska mid joogto ah marka ay timaado wakhtiga jiifka, cuntada, iyo jimicsiga.
Haddii carruurtaadu ka qaybgalaan fursadaha waxbarashada masaafada ah ee uu bixiyo dugsigooda ama urur kale, u raadi carruurtaada fursado si ay qaab ammaan ah ula falgalaan ilmaha facooda ah.Waa inaad fahantaa dareemida sida cidlada, cajiska, cabsida aad kaqabto inuu cudurka kugu dhaco, walaaca, walbahaarka, iyo cabsida ay yihiin falcelinta caadiga ah oo looga falcelinaayo xaalad dhibaato leh sida aafada cudurka.
Ka caawi qoyskaada inay sameeyaan hawlo madadaalo ah ama micno leh kuwaas oo waafaqsan qiyamka/anshaxa qoyskaada iyo dhaqankaada.
COVID-19: Xogta, adeegyada iyo ilaha Laga helo Washington State
Sida si badbaado leh loola joogo saaxiibada iyo qoyska
Geedka Go'aanka/Qaabka Go'aan Kadoorashada xulashooyinka ee astaamaha COVID-19 (oo Af-Ingiriisi ah)